Inona izany, ny fomba fiasan'izy, rehefa mitandrina ny Kilasy
Inona izany, ny fomba fiasan’izy, rehefa mitandrina ny Kilasy
«Ny Raharaham-barotra, ny Fiantohana, amin’ny toe-javatra rehetra, ny famaranana ny vaovao fifanekena, momba ny fanampiny fiara ny karazana iray ihany, nividy ny ara-boajanahary ny olona efa-mpihazona ny fiantohana politika na amin’ny alalan’ny singa stably cohabiting ao an-tokantrano, mety tsy hanome ny fifanarahana iray kilasy ny tena unfavourable raha ampitahaina amin’ireo vokatry ny farany mety ho taratasy azo ny fiara efa azo antoka». Hi, satria tany Italia ny kilasy ny fahamendrehana dia mifandray ny fiara, ary tsy ho an ‘ny mpiantoka, ary ny tompon’ ny fiara. ary nahoana moa aho no mba hiaro azy mba hanerena ny milina na ny hafa aho raha te-hifindra amin’ny fiantohana hafa fiara nefa tsy mba hanomboka avy amin’ny cesima kilasy. ary indrindra fa inona hallucinatory ahy ary nilaza hoe: chel’ fiantohana aumeta, satria ho azy ireo, ny peugeot kokoa mety ho loza ny fordfaccio mariho fa ny ford dia roa amby roa-polo taona metrre ny peugeot manana afa-tsy ny sivy. Hi Mr. Diego, dia nanontany fanontaniana maro ao anatin’ity lahatsoratra ity, noho izany dia miezaka ny hamaly ny manondro:) Nahoana no afa-tsy any Italia ny kilasy ny fahamendrehana, ary dia mifandray ny fiara, ary tsy ho an ‘ny mpiantoka, ary ny tompon’ ny fiara. Tany Italia ny Kilasy ny Fahamendrehana dia notendrena ny Tompon’ny fiara) Nahoana no tsy maintsy hiaro azy mba hanerena ny milina na ny hafa aho raha te-hifindra ny fiantohana hafa fiara nefa tsy mba hanomboka avy amin’ny cesima kilasy. Noho ny antsoina hoe Bersani Lalàna ny taona, dia tsy ilaina intsony ho very ny fizakana ny fiara mba efa nahafantatra azy sy ny fianakaviany ny kilasy ny tena mahasoa. Ny Kilasy ny Fahamendrehana dia very raha tsy ho dimy taona dia efa azo antoka ny fiara ny fananana.) Ary indrindra fa inona ny hallucinatory efa nilaza fa ny fiantohana dia mampitombo satria, ho azy ireo, peugeot ary bebe kokoa amin’ny mety ho loza ny ford aho mariho fa ny ford dia roa amby roa-polo taona maro, raha ny peugeot manana afa. Foana izy ireo te hahalala ny lojika ny kajy mikasika ny mety ho fiantohana tsirairay. Tsy afaka hilaza azy ny antony, dia afaka mihevitra fa ny kajy ny premium, mandanja ihany koa ny toratelo fahaiza-manao sy ny hery sy ny hery, ankoatry ny taona maro ny fiainana ny fiara aho dia te-hahafantatra izay ny fihenam-bidy isan-jato izay mihatra amin’ny mari-pankasitrahana ny fanavaozana isan-taona ny mpanjifa izay tsy nanao zava-nitranga tamin’ny taona teo aloha.
Hi tiako ho fantatra satria raha mampihatra ny Bersani ny lanjan’ny ny loka nokajiana eo amin’ny mitovy karazana fiara samy manana ny lanjany. Avelao aho hanazava tsara kokoa, dia nividy vespa lml ampiasaina, ary nanontany aho hoe: mba hampihatra ny Bersani ny vadiko izay manana Vespa Piaggio ao am-pianarana enina miaraka amin’ny loka, taona. Mandritra izany nanaovana ny toe-piainana, ny orinasa iray mangataka isan-taona ny premium ny, euro. Koa ny fomba ny hatramin’izay ny asa ny mety ho mpianatra manaraka ny fifanarahana matotra ny politika, ary avy eo dia voahidy ao ny zava-nitranga ny fampiatoana ny politika sy tsy kajy (mandrakariva eo anatrehan ny politika) ao amin’ny taona farany. Raha ny hevitro, ny mety ho mpianatra dia tsy maintsy ho amin’ny asa ny taona raha tsy misy ny filazana izany, dia araka ny nanaovana maturities. Koa ny amin’ity tranga ity, aoka hazavao amin’ny ohatra ny aho raha toa ka manomboka amin’ny kilasy valo ambin’ny folo sy ho maro taona aho no milaza, fa vonoy ny fiantohana politika dia ao amin’ny ririnina, izaho tsy maka ny fifanekena nandritra ny telo taona, fa tsy hoe ao am-pianarana valo no mbola any am-pianarana. Miarahaba, dia hypothesize fiara hitondra ny anaran ny sonia. mena sy ny famantarana Alfredo(famantarana alfredo tsy manana fiara sy ny fiantohana) izay tsy miaina any an-tanàna’, ny famantarana rossi, na izany aza, dia ao amin’ny kilasy amin’ny fiara iray hafa B nankany afa-tsy ny azy, ny roa sonia te-mba ho azo antoka ianao fiara amin’ny Bersani lalàna ny fiara b, mihevitra ho manana ho ataony l fiantohana rehefa afaka taona iray eo amin’ny taratasy fanamarinana ny mety izay. Koa ny famantarana Alfredo efa nahazo ny kilasy voalohany, araka ny iconoclastic ny polisy. Gent. ny i Jaona, ilay bersani lalàna azo ampiharina, ary mahatonga ny momba ny mpikambana ao amin ny ankohonanao. Ao amin’ny ohatra dia tsy fantatro iza no Andriamatoa Alfredo, ary inona no mari-pahaizana toy ny karavato ho Andriamatoa Rossi, fa na inona na inona ny lafiny io, Andriamatoa Mena azo antoka fa manana ny fahafahana mampiasa ny fotodrafitrasa toy ny tompon’ny fiara B, raha ny Mr Alfredo toa tsy misy mety. Izany hoe, amin’ny ambaratonga ny tariff, ao ny raharaha ny mpiara-fahazoan-dalana mahakasika ny fiara, matetika Fiantohana ny Orinasa handinika ny lafin-javatra»age»ary mampihatra ny tahan’ny dia manondro ny avo indrindra mety. dia mba mangataka ny fanontaniana manaraka izao: ny sig. izy no maty, fiara ny fananana dia nanao ny dingana iray mankany amin’ny famindram-po ny zanany lahy tokana, ny mpandova, ny zanany lahy dia mety foana ny kilasy TORA ny ray. Gent. mo Andrea, dia matetika izany no atao, dia manaraka ny famindrana ny fiara nanaiky ny rehetra ny mpandova. Raha amin’ity tranga ity ny mpandova iray ihany, ny fomba tsotra. Raha toa ka mihoatra ny iray, dia hanana ny boky kely ny fikorianan’ny, hofany ny tompon’ny maro, ary ao amin’io tranga io dia ho tsaratsara kokoa ny manao bebe kokoa ny dingana mankasitraka an’ireo izay dia hampiasa ny antonony. Amin’ny toe-javatra roa, ny Orinasa, nanolotra ny tahirin-kevitra rehetra ilaina, ary tsy misy fitsarana an-tendrony ny Kilasy, dia ampiharo ny vaovao saran’ny amin’ny fandinihana ny taona ny tompony vaovao, na taona ny tompony dia heverina ho»atahorana»(raha ny ny tompony dia samy hafa). Fa hoy ianao, dia mila mijery raha toa ka ny Politika teo aloha, natao ho Andriamatoa Rossi efa accrued tsy tapaka ny farany mety ho mari-pankasitrahana sy ny, noho izany, ny Kilasy ny Fahamendrehana, izay amin’izany toe-javatra izany dia azo afindra.
Hi, aho ny politika fiantohana nalaina avy amin’ny orinasa an-tserasera, miaraka amin’ny enina isam-bolana repayments, nahita ny tenako tao amin’ny fahafaha-mamita fanaovan-handoa ny fizarana faharoa, dia nijanona ny fiara fa tsy ny fiantohana. Rehefa maro ny fampahatsiahivana dia nandoa ny trosa eny aho hangataka mba hanana ny taratasy fanamarinana ny mety mahatsapa aho ny milaza fa izany dia tsy azo atao raha manana aho karama araka ny expiry ny politika, ary ny vahaolana tokana ho fanomezan-toky ny fiara dia manomboka amin’ny faha- am-pianarana. fa izany no azo atao. Gent. mo Vicentino, izy no aloa ny fizarana faharoa enim-bolana ela, saingy tsy fantatro hoe mandra-pahoviana. Raha toa ianao ka efa tonga ny fanao isan-taona araka ny Fifanekena, toy ny tsy misy tsy tapaka ny ara-pitantanana, ny Fanamarinana, dia tsy ho namoaka. Ny dia manoro hevitra anao hifandray ny Orinasa ary mangataka manokana inona avy ireo antony mahatonga izay dia tsy azo atao mba hahazoana Taratasy fanamarinana. Mety ho izay ny Politika ho avy izao ny faran’ny isan-taona, dia nofoanana izany, ary soraty-eny ny Loka Vonjimaika).
Aho karama araka ny fanao isan-taona ny fe-potoana, nefa mbola karama, ka izay lalana mety ho mandeha mba reinsure ny fiara. Gent. mo Vicentino, marina izany fa vola, nefa izany no marina ihany koa fa ny Insurer manana zo hitaky ny manontolo Isan-taona ny Premium (na dia, toy ny ao an-nitranga, fractional). Izany no ijerena raha nisaina ny taona iray teny hoe ny Fifanarahana izay iray ihany, ao ny tsy fisian’ny tsy tapaka ny ara-panjakana, izany dia mety ho foanana. Izany hoe, ny fitsipika assuntive manome izay, ao ny raharaha ny tsy fahampian’ny ny taratasy ilaina mba hahazoana antoka ny fiara ary koa iray ihany ny antontan-taratasy manan-danja toy ny fanambarana momba ny Toetry ny Mety kilasy assignable ny faha. Na dia izany aza, araka ny efa voalaza, miezaka ny hahita ny alalan ny tafatafa niaraka tamin’ny Orinasa vahaolana hafa, izay misy.
Satria ny fiantohana dia tsy maintsy atao, ny legifferatore tokony ampidiro ny valin-drihana ambony indrindra izay orinasa fiantohana dia tsy dovrebberero mandeha mihoatra noho izany satria isika no manana ny tahan’ny efa ho avo roa heny raha oharina eoropa. Izy ireo diffendono ny fialan-tsiny momba ny hosoka, fa izaho (toy ny maro avy any Italia) aho no tsy ambakaina, dia eo -pianarana ho an’ny efa-taona ary mbola tsy maintsy miady isan-taona miaraka amin’ny FAMANTARANA ny fiantohana sy ny karama iray trotroana ny vola rehefa, ohatra, ny alemà na ny frantsay mandoa (aparità kilasy sy toratelo fahaiza -) tsy fahatelo. Nanao ny lalàna sy hita ny famitahana, ary ny vahoaka mandoa. Ry Jaona, ny foto-kevitry ny RC Fiara ao amin’ny Firenena no tena sarotra. Ny taha dia ny ambony indrindra any Eoropa noho ny antony maro, anisan’izany ny rafitra fitantanana ny milaza fa tokony ho tanteraka nandinika sy izay miteraka eo ho eo ny vidiny avo dia avo, ny fisolokiana tokoa Izy rehefa miresaka, efa ho tanteraka tsy fahampian’ny fifaninanana nahatonga indrindra ny tsy fahafaha-mamita fanaovan amin’izao fotoana izao (na dia eo aza ny isan-karazany ny firotsahana an-tsehatra amin’ny Antitrust fahefana) fa Mpanakalo mba hanolotra fiantohana ny ankamaroan’ny Orinasa Fiantohana (Ny Plurimandato tsy mbola naorina ny Firenena). Satria ny Taham-tena avo (na dia teo aza ny fihenan’ny tao anatin’ny taona vitsivitsy), ary ny krizy izay tsy hiondrika ny toe-karena, izay efa mihoatra ny. ny fiara izay tsy azo antoka. Ny tena loza ara-tsosialy izay efa voalaza ao amin’ny lahatsoratra iray hafa. Ny mpanao lalàna dia tsy maintsy miditra an-tsehatra ho zava-dehibe sy maika mba misy ny olana, ary ny fanavaozana ny sehatry dia mifototra amin’ny ny lamina efa antitra sy tsy misy intsony ao amin’ny dingana miaraka amin’ny fotoana sy ny zavatra ilaina ny an-tsena. Misaotra noho ny fanehoan-kevitra, amin-kitsimpo
Ahoana no fomba ahafahana mahazo pasipaoro diplaomatika